Qaybta 1. Lugood gurmad kale: Wondershare MobileTrans
Qaybta 2. Top 2 iPhone xal kala iibsiga qalabka gurmad kombiyuutarka
Waxa uu ahaa muddo dheer tan iyo markii aan la soo bandhigay in Lugood by Apple abuurista hayaan. Iyo, tan iyo markaas waxa uu ahaa xalka default leenahay gurmad la ama wax yar updates ugu waaweyn ku sameeyey in ku sannado badan. Ma waxaad tahay qof ka daaleen isticmaalaya Lugood jir iyo clunky la mid ah sida aad Tababaraha gurmad? Haddii "haa" waa jawaab oo aad ku raadineyso kale oo u Lugood markaas waxaan heysanaa news weyn oo aad u.
Your search for kale si istaahil in gurmad Lugood ku eg yahay maanta. Waxaan la idin soo bandhigid doonaa sida ugu fiican heli karo gurmad xal ilaa taariikhda - Wondershare MobileTrans.
Hadii ay jirto Converter ka mid ah xal gurmad ama software, waxaa la Wondershare MobileTrans lahaa. Waxaad arki, si dhib jiro wax codsigan la yaab leh ma aan samayn karo. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad xog ka phone wareejiyo kaliya 1 click, raad raac aad telefoon si PC iyo xitaa dib u soo celineysa xogta xoojiyaa in mid ka mid ah qalabka ku taageeray adiga; oo dhan lagu sameeyey 100% halis hab xor ah oo ammaan ah.
Sidan u fududahay in la isticmaalo Wondershare MobileTrans.
Kaabta iyo soo celinta xog telefoonka aad
Talaabada 1: Iyada oo macruufka ah ama qalab kasta oo kale oo ku xiran si aad u computer aad. Laga soo bilaabo interface weyn ama Home menu, dooranayaan ee kaabta in la furo Panel ee kaabta. Hubi in macluumaadka aad rabto in aad gurmad waxaa loo doortay oo dhan ka dibna si fudud guji badhanka 'Start Copy'.
Talaabada 2: Si loo soo celiyo qalab aad, dooranayaan Soo Celinta ka menu Home oo lagu xiro qalabka aad si aad u computer. Codsiga waa in hadda muujiyaan liiska oo dhan hayaan heli karo, dooro mid ka mid ah in aad rabto in aad isticmaasho iyo sidoo kale waxa ku qoran lahaa doonayn in dib loo soo celiyo ka dibna ku dhuftay 'Start Copy' si ay u bilaabaan dib u soo celinta xogta ka file gurmad ah.
Soo Celinta gurmad Lugood ee content in aad telefoon
Waxaad sidoo kale si aad Android wareejin kartaa playlists Lugood iyo sidoo kale qalabka macruufka isticmaalaya MobileTrans.
Xogta Transfer ka iCloud in Android
Talaabada 1: Raadi doorasho iCloud / logo gudahood block ugu soo celin iyo saxaafadda si aad u soo galaan Celinta ka iCloud gurmad hab. Waxaad laga yaabaa in ay gasho si aad xisaabta iCloud haddii aan horay u samaynin. Waa inaad awoodaa inaad ka aragto oo dhan files gurmad hadda noqon.
Talaabada 2: Hadda, dooran gurmad iCloud ee ka mid ah liiska laga heli karaa si ay u soo bixi.
Tallaabada 3: Marka gurmad ah ayaa la soo bixi iCloud, lagu xiro qalabka Android iyo weeraray 'Start Copy' badhanka laga bilaabi karo habka ugu dambeeya.
Iyadoo si fudud habka ah in gurmad qalabka macruufka aad, sababta ay qof kasta oo doonaya in ay u isticmaalaan Lugood dambe, sax?
Hadda, aynu Ruuxana ku eegno labada xal kala iibsiga iPhone ugu kalsoonaan karo oo waxtar leh in aad ka heli kartaa gacmahaaga on.
Xalka 1: Wondershare TunesGo Retro
Developer: Wondershare Features Muhiimka ah:
• Share, maareeyaan iyo soo celinta Lugood music iyo video xor ah
•	dib u dhiska maktabadda Lugood
• U dayactir iyo tayadoodii macluumaad song si toos ah
• Maaree iyo wareejiyo fariimaha, sawiro, xiriirada iyo files
Xalka 2: Senuti
Lugood kuu ogolaanaysaa inaad music ka PC ama Mac wareejiyo si aad iPhone ama iPod Si kastaba ha ahaatee, haddii aad doonayso inaad ka qalabka macruufka aad wareejiyo music si aad u computer, nasiib fiican leh in sida Lugood ma taageeri habkaani. Xaq u niyad?
Waa hagaag, tani waxay ahayd mid ka mid ah sababaha aasaasiga ah sababta engegay Red abuurtay Senuti, taas oo codsi weyn kuu oggolaanaysa in aad soo kabsado videos, music iyo playlists ka iPhone ama iPad aad u fudud.
Developer: engegay Red Features Muhiimka ah:
• Mid ka mid ah soo kabashada tallaabo
• Marka la barbardhigo Lugood
• Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Song
• playlist kala iibsiga
> Resource > Lugood > Top 3 Lugood Alternative kaabta